Hi mara mma ndị mmadụ! Dị ka anyị niile maara na a gbajiri obi bụ otu n'ime ndị mere na anyị nile dị ka ụmụ mmadụ nwere ike mfe ịkọrọ, ma i nwere ike na-enwe naanị. Obi mgbawa na eme nzuzu, otú ndakpọ. Right ugbu a, anyị bụ ndị a na-eso unu kasị mma collection nke n'elu agbajikwa obi mwute statuses na ga-ekwe ka ị na-akọwa otú obi dị gị okwu ole na ole ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ. Ya mere ụmụ okorobịa na-anwu bụ n'elu! Na-esonụ bụ ndị agbajikwa obi statuses. Broken Heart statuses: ma GỤKWUO [...]
ndewo onye ọ bụla! Short WhatsApp statuses na-ezigbo amalite a na mkparịta ụka na a ụzọ kasị mma na-emeghe. Nke a na oge anyị jikọtara niile jụụ na pụtara WhatsApp statuses na otu n'elu ikpo okwu, ya mere na ị na-adịghị mkpa na-aga ebe ọ bụla ọzọ. Dị nnọọ elele ndị a si! Short WhatsApp Status: Onye ọ bụla nwere manụ na enyi. Ọ bụrụ na ị na-adịghị n'ezie nwere otu, mgbe ahụ, ọ bụ eleghị anya unu! Chineke bụ n'ezie ihe. Echere m, lee m anya! Ọ dịghị aṅụ- Ọ dịghị mmanụ aṅụ, dịghị ọrụ-ọ dịghị ego. Ọ bụrụ n'ezie na unu na-eme adịghị GỤKWUO [...]
ndewonu! Olee otú ị na-niile? M na-atụ unu niile na-eme ihe ọma. Ya mere ụmụ okorobịa ọzọ anyị bụ ndị a na-otu nke kasị mma ịnakọta nke anyị banyere ndụ. Ọ kpamkpam na-adabere na anyị otú anyị si ebi ndụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị na-enwe na ya ma ọ bụ na. Na onye ọ bụla ịrị elu nke anyanwụ, ị ga-esi ịchụ ohere jupụta ụbọchị gị na pụtara-ibi ndụ gị ihe n'ụzọ nke ị họrọ. ugbu a, anyị bụ ndị a n'ihi na ị na-etinye ọtụtụ nke mgbalị anyị dị nnọọ ka ihe kasị mma nke anyị nanị maka unu. M na-atụ gị na-Ekwughị ọrụ anyị GỤKWUO [...]
Ịhụnanya Quotes na Ịhụnanya statuses Ozi
ndewonu! M na-atụ unu niile na-eme ihe ọma. Ya mere ụmụ okorobịa! Ị nwere mmasị ị na-ekere òkè ịhụnanya na ikuku? Oh mere nnọọ na ị na-eche ee? Mgbe ahụ, ị ​​rutere na nnọọ nri ebe dị ka anyị bụ ndị a n'ihi na ị na! Taa, anyị na-elu na oké collection of kwuru nke i nwere ike iji dị ka gị statuses on Facebook, WhatsApp, Twitter na ike mfe ịkọrọ gị mmetụta ndị ị hụrụ n'anya. Agbanyeghị enweghị imefusị ihe nke oge gị, ka malitere. List of Ịhụnanya Quotes na statuses: m GỤKWUO [...]